Nidaamka – Windows – Vessoft
Tijaabada iyo Tijaabooyinka
Microsoft Visual C ++ Dib-u-daabacan – waa qaybo qaybo ah si loo ballaariyo astaamaha is-dhexgalka iyo warbaahinta kombiyuutarka. Softiweerku wuxuu xaqiijiyaa hawlgallada saxda ah ee codsiyada iyo cayaaraha kala duwan.
Adobe Flash Player – waa codsi caan ku ah daalacashada oo bixiya dib u soo celinta waxyaabaha ka kooban warbaahinta inta lagu jiro internetka. Sidookale, softiweerka waxaa loo isticmaalaa in lagu hormariyo waxyaabaha madadaalada.
Java – teknolojiyad loogu talagalay hawlgalka buuxa ee qaybaha kala duwan iyo codsiyada ku qoran luqadda barnaamijyada Java. Softiweerku wuxuu si weyn u fidiyaa fursadaha biraawsarka iyo codsiyada bilaashka ah ee shabakadda.
DirectX – xirmo codsiyada loogu shaqeynayo wax ku oolnimada faylalka warbaahinta iyo cayaaraha. Softiweerku wuxuu saameeyaa habeynta walxaha garaafka, durdur sanqadha, iyo tayaynta cayaaraha.
Shell Classic – barnaamij kombiyuutar loogu talagalay qaabeynta naqshadeynta Windows. Sidoo kale, softiweerku wuxuu taageerayaa tiro badan oo qalabyo dheeraad ah si loo xoojiyo menu.
Adobe Creative Cloud – waa barnaamij lagu soo dejinayo laguna cusboonaysiinayo alaabada Adobe. Sidoo kale, softiweerku wuxuu soo bandhigayaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan codsiyada la heli karo si loo soo dejiyo.
Xirmo Darawalkii si loo hubiyo in loo maqli karo saxda ah ee durdurrada audio. Software waxay leedahay soo noqnoqoshada bandwidth sare iyo taageero xiriir si aad u qalabka audio kala duwan.